Dhaliisha Dadka - Daryeel Magazine
Kusoo Dhawaada barnaamijka Xasuus qor dhakhtar ilkood oo ay soo diyaariso Dhaktar Hibaaq Buubaal.
Xalqadaan waxay gaar u tahay qof kasta oo guul iyo horumar noloshiisa gaadhay oo hadalka dadku uu dhibay, bini-aadam kasta oo nolosha guul doonaya inuu gaadho oo dagaal kula jira dadka hadalkooda marna u jawaabaya marna ka aamusaya.
Xalqadaan waxay gaar u tahay qof kasta oo dadku ay hadal hayaan dadka hadalkoodu uu dhibay.
Marka ugu horreysa waxaan kuugu bishaaraynayaa qofka ay dadku ka hadlaan waa qofka horumar gaadhay iyo heer nolosha gaadhay ee wax qabad leh. Waxaad garataa dadku waxay dhagaxa ku tuuraan geedka miraha leh.
Psychology Dabeecadaha Dadka Wax ka Ogow! Astaamo U Gaar Ah Oo Ay Leeyihiin Dadka Guulaysta 10 Caado Oo Qofka Joogteeya Ka Caawiya Inuu Kasbado Qalbiyada Dadka Ku Xeeran & Bulshada Psychology Dabeecadaha Dadka: Maxay Dadka Ku Neceb Ay Kuu Neceb Yihiin?
DHIB MASA DHIBANE
Waxaan halkaan ka salaamaya maamulka Daryeelmagazine iyo akhristayaasha Soomaaliyeed meelkasta oo ay dunida ka joogaan.Dunida …